Ufunda kanjani ama-Dates? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Funda usuku lokuphelelwa isikhathi - ukuthi ungaxazulula kanjani
Funda usuku lokuphelelwa isikhathi - ukuthi ungaxazulula kanjani
Ufunda kanjani ama-Dates?
Izinombolo 1 kuye ku-9 zivame ukumela izinyanga kusukela ngoJanuwari kuya kuSepthemba, ngokulandelana. Uhlamvu 'O' imele ukumelela u-Okthoba, u-'N 'umele uNovemba kanti u-'D' umele uDisemba emathinini amaningi. Ezinye izinkampani zibala inyanga ngemuva kwe-usuku, ngakho-ke bheka kwenye indawo kukhodi yezinhlamvu futhi.
Sawubona, igama lami ngingu-Oli. Uyemukelwa ku-Oxford Online English. Ake ngikubuze umbuzo, 'Lunini usuku lwakho lokuzalwa?' Lo ngumbuzo olula, kepha abafundi abaningi besiNgisi abakwazi ukuwuphendula ngaphandle kwephutha, kungenxa yokuthi ufunda amaDates esiNgisini - izinyanga, iminyaka nezinsuku - ayinkimbinkimbi impela.
Kulesi sifundo, sizobheka ukuthi zingafundwa kanjani izinsuku ngesiNgisi. Ake siqale ngesibonelo. Uyabona-ke lokho.
Ungakusho kanjani Empeleni, kunezinketho ezimbili. Ungathi, 'Novemba nane' noma 'Novemba nane.' Ake senze esinye isibonelo.
Uyabona lokho. Ungakusho kanjani? Futhi amathuba amabili afanayo: “Septhemba wamashumi amathathu” noma: “Septhemba wamashumi amathathu”. Uyabona ukuthi asijwayele ukuwabhala la magama, 'u' no 'ka', kepha sithi 'u', ikakhulukazi esiNgisini saseMelika, ngakho-ke uma ungaqiniseki ukuthi kungcono ukusebenzisa u - 'the'.
Okulandelayo, ake sibheke iminyaka, kuthiwani ngeminyaka, ake sibheke iminyaka emihlanu futhi ngifuna ucabange ukuthi ungayisho kanjani. Cabanga ngezimpendulo zakho. Misa isikhashana i-athikili futhi Uma ungaqiniseki, cabanga ngezimpendulo zakho.
Kulungile, ake sibheke, sithi, 'Amakhulu ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye', 'Amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye', 'Amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili', 'Izinkulungwane ezimbili nanye', 'Izinkulungwane ezimbili neshumi' noma 'Amashumi amabili neshumi'. Sidinga imithetho ehlukile yeminyaka ngaphambi nangemva kwezinkulungwane ezimbili. Ngakho-ke iminyaka ngaphambi kuka-2000, uma unyaka uphela ngo-'00 ', sebenzisa amakhulu, hhayi izinkulungwane.
amakhukhamba amajusi amaphakethe
Ngakho-ke yithi: 'ishumi nesishiyagalolunye lamakhulu' hhayi 'inkulungwane namakhulu ayisishiyagalolunye' 2
03 'njll., Biza u-' zero 'njengo-'oh' futhi ungasho ikhulu. Ngakho-ke sithi 'ishumi nesishiyagalolunye oh one', 'eighteen oh two', 'seventeen oh five' njalonjalo.
Uma unyaka uphela ngenani elingaphezu kweshumi, yisho unyaka ngezingxenye ezimbili. Isibonelo: 'ishumi nesishiyagalombili namashumi amabili', 'ishumi nesishiyagalolunye namashumi amahlanu nanhlanu' noma 'ishumi nesishiyagalolunye nesishiyagalolunye nesishiyagalolunye nesishiyagalolunye'. Sidinga imithetho ehlukile yeminyaka yangemva kuka-2000.
Iminyaka 2000-2009, sebenzisa inombolo ephelele. 'Izinkulungwane ezimbili', 'Izinkulungwane ezimbili no-munye', 'Izinkulungwane ezimbili nezimbili' njll. Ngeminyaka ka-2010-2019 ungakhetha: Ungasho inombolo ephelele - ungathi “Izinkulungwane ezimbili neshumi,” noma ungakwazi usho unyaka ngezingxenye ezimbili: 'Amashumi amabili neshumi.' Kuyafana nayo yonke le minyaka, ngakho-ke ungasho ukuthi, 'Amashumi amabili nanye' noma 'Izinkulungwane ezimbili neshumi nanye'. zombili zilungile.
Ngo-2020 nangaphezulu, usengakhetha ukusho unyaka ngezingxenye ezimbili noma inombolo ephelele, kepha ukusho ukuthi unyaka ezingxenyeni ezimbili uzojwayeleka kakhulu ngezinkulungwane ezingamashumi amabili namashumi amabili 'yize zombili zilungile. Kwesinye isikhathi sinciphisa idatha futhi sisebenzise ifomu elifushane. Isibonelo, sivame ukunciphisa iminyaka kusuka esikhathini esedlule ngokufunda kuphela izinombolo ezimbili zokugcina zonyaka.
Isibonelo, ungathi 'amashumi ayisishiyagalombili nanye' ngo-1981 onjengokuthi, 'Umfowethu wazalwa amashumi ayisishiyagalombili nanye. '2001 kungaba ngu-oh-one': 'Ngithweswe iziqu ku-oh-one'. ' U-1999 angaba 'amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye', njengokuthi: 'Uqale ukusebenza lapha eneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye.' Futhi kwesinye isikhathi sifinyeza izinyanga ngokusebenzisa inombolo yenyanga esikhundleni segama.
Ngakho-ke uma usuku lwakho lokuzalwa lungoJuni 20, 1989, ungalifunda kanjena: 'Amashumi amabili wesithupha, amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye.' Lokhu kuvame kakhulu ikakhulukazi lapho unikeza imininingwane ngocingo, noma ebhange, esitolo, into enjalo, abantu bakusebenzisa kancane lokhu. Kulungile, lokho ukuphela kwesifundo, ngethemba ukuthi ukuthole kuwusizo.
Uma ubuka lokhu ku-YouTube, ngincoma ukuthi ufunde isifundo esigcwele kuwebhusayithi yethu, isifundo esigcwele sinombhalo kanye nokuzivocavoca ukukusiza ukwenza lesi sihloko, kepha kuphela, ngiyabonga ngokubuka futhi sizosibona ngokuzayo .
Ufunda kanjani izinsuku zokuphelelwa yisikhathi zaseCanada?
'Kuzophelelwa isikhathi ngaphambi komhla ka'usukukumele kubonwe kusetshenziswa amagama athi 'Kuzophelelwa isikhathi ngaphambi komhla ka'kanye' ne-meilleure avant 'kanye neusuku. Lokhu kungavela noma yikuphi kwiphakeji - futhi uma kungaphansi, lokho kubekwa kufanele kuboniswe kwenye indawo kwilebula.Agasti 13 2013
Kungani kufanele sifunde usuku lokuphelelwa yisikhathi?
Usuku lokuphelelwa isikhathiyiusukulapho ukudla kugcina khona ukuzinza kwe-microbiological kanye nomzimba, nokuqukethwe komsoco okumenyezelwe kwilebula. Lokho kusho ukuthi kubalulekile ukusebenzisa lokho kudla ngaphambi kwe-usuku Eliphelela ngaloukuthola inani lokudla okunempilo kakhulu kuyo.UMar 9 2012
ukuhamba ngebhayisikili ukuya emsebenzini
Uyazi ukuthi iphunga elibi, elimuncu lobisi oluphelelwe yisikhathi? Yebo. Kumele uyinuke kanye kuphela ukuze uqiniseke ukuthi ayiphinde yenzeke. Ngenhlanhla, abenzi bokudla abaningi banezinhlobo ezithile ezinhle ngaphambi kosuku, ngaphambi kosuku, noma basebenzise usuku ngemikhiqizo yabo ukukutshela kahle, abakutsheli okuningi.
Lawa amalebula enzelwe izinhloso zekhwalithi nokunambitheka, hhayi ukuphepha. Futhi ukudla okuningi okuvamile kuyadliwa ngaphezu kwalokho okushiwo ilebula, okwenza kube nzima ukuthola ukuthi yini ongayidla nokuthi yini okudingeka ibe emgqonyeni womquba. Kepha ukuqonda ukuthi kwenzekani ngamakhemikhali lapho ukudla konakala ngaphambi nangemva kwalolo suku kungakusiza.
Usuku lokuphela langempela lomkhiqizo kunzima ukuluqagela ngoba yonke into kusukela ekuhlanzeni ifektri kuya ekushiseni kwesiqandisi sakho kungathinteka. Kodwa-ke, okuningi kuncike ohlotsheni lokudla okuthengayo. Isibonelo, imikhiqizo ingaba engaphephile ngemuva kwamahora noma amasonto ukuyithenga; umehluko omkhulu amalebula amaningi awunaki.
Okuningi kwalokhu kuhlobene nokukhula kwesikhunta, hhayi izinto ezinjengamabala ansundu. Azibukeki zizinhle, kepha azinabungozi. Isikhunta singalimaza okwamanje. Ezinye izinhlobo ziveza izinto ezibizwa ngokuthi ama-mycotoxin, angadala noma yini kusuka ezifweni zesikhumba kuya ekopheni kwangaphakathi nokufa.
Futhi ngenxa yokuthi imikhiqizo iyikhaya elinothile olunamanzi nezakhi ezinjengezikhunta, zingakhula ekhaya ngemuva kwamahora angama-24 imikhiqizo yakho ingenisiwe. Futhi emazingeni okushisa afudumele ikhula ngokushesha okukhulu, njengasetafuleni lakho lasekhishini elibalele. Kodwa-ke, impilo eshalofini yemikhiqizo yakho idinga ukwandiswa Kulula: vele uyiphonse efrijini.
Ukusabela kwamakhemikhali kwenzeka kancane emazingeni okushisa abandayo, ngakho-ke kuthatha isikhathi eside ukuthi isikhunta sikhule futhi sande kuso, kodwa ekugcineni sizokhula, kungaba ngemuva kosuku noma amasonto ambalwa Sekuyisikhathi somquba. Ukwehlisa izinga lokushisa kungaba iqhinga elihle ekugcineni ukudla okuningi. kepha uma ufuna ukuhlehlisa ngempela usuku lokuphelelwa yisikhathi, amabhaktheriya adinga ukubulawa ngaphambi kokuba ande.
Akulula ngemikhiqizo, kepha yileyo ndlela esiluphatha ngayo ubisi. Ngokusho kwelebula, ubisi luvame ukuhamba phambili emasontweni amabili ngemuva kokuluthenga. Kepha kuya ngokuthi uthenga uhlobo luni nokuthi uluphatha kanjani, empeleni kungaphelelwa yisikhathi ezinsukwini ezimbalwa kamuva noma ngaphambili.
Ubisi lwendabuko luhamba ngenqubo yokugcotshwa, inqubo yokwelapha ukushisa edonsa futhi ilimaze ama-enzyme kumagciwane aphilayo, umsebenzi omuhle, kepha awuphelele. Amanye ala mabhaktheriya asinda ekunciphiseni ukudla futhi, ngokuhamba kwesikhathi, aguqula ushukela obisini ube yi-lactic acid. Yilokhu okunikeza ubisi olonakele olunephunga elimuncu.
Le nqubo imvamisa ithatha amasonto ambalwa futhi imvamisa iyaphuza cishe izinsuku ezinhlanu ngemuva kosuku olungcono kakhulu. Kodwa-ke, uma ubisi luthola ukufudumala kancane ndawana thize emzileni wokuhambisa, noma uqhuba isiqandisi sakho ukufudumala okuthe xaxa, kungonakala ngokushesha. Futhi ngenkathi kungenakwenzeka ukuthi usongele impilo ngokuphuza ubisi olonakele, ungathola ubuthi bokudla ngesihluku.
Izindaba ezimnandi ukuthi, kulula ukusho uma ubisi lonakele. Vele uzame bese uthatha lelo phunga elimnandi le-lactic acid. Ekugcineni, ngenkathi izindlela zokushisa zikulungele ukususa amabhaktheriya obisini, udinga isu elihlukile lenyama.
Imvamisa, okuhle ngaphambi noma okuhle ngaphambi kosuku lwale mikhiqizo kuyisonto ngemuva kokuthengwa, kepha ngenkathi kuvame ukuphepha emuva ngaleso sikhathi, akuhlali isikhathi eside kangako. Ngoba inyama iyindawo yokuqala yokuzalanisa amabhaktheriya. Yikhaya elimanzi, elinomsoco onazo zonke izinhlobo zemithombo yamandla.
Izinsuku ezimbalwa, la mabhaktheriya ngeke akudalele izinkinga ngoba awekho maningi kangako. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi ziyanda. Futhi-ke ungena enkingeni.
amasokisi wamabhayisikili apholile
Amagciwane, afana nePseudomonas noma iLactobacilli, adla phezu kwenyama, lapho enama-molecule kashukela antantayo amahhala khona kanye nezakhi ezikhanyayo ukukhombisa. Amanye ala mabhaktheriya angakugulisa, kodwa okungenani azokwenza ukuba khona kwawo kwaziwe. Lapho bephula la makhemikhali, bashiya ngemuva imikhiqizo ethile enuka kabi.
Lokhu kunezinhlobonhlobo zezimo nokwakhiwa, kepha konke kuwela esigabeni esibizwa ngama-organic compounds, noma ama-VOC. Imvamisa la ma-VOCS anuka njengenyama ebolile. Futhi ngoba uwathola lapho amagciwane edla futhi anda, kunophawu oluqinile lokuthi inyama yakho ihambe kabi.
Ngaphezu kwephunga, ungatshela ukuthi inyama yakho iphelelwe yisikhathi kuye ngokuthi ibukeka kanjani. Isibonelo, ama-VOC afana ne-hydrogen sulfide angaguqula i-pigment yemisipha yemvelo enyameni ibe yinto ebukeka iluhlaza. Imvamisa lokhu kwenzeka ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kosuku lokuphelelwa isikhathi kwalesi sitikha.
Kepha uma ubona noma yiliphi lala maphunga amnandi noma i-slime encane enkomeni yakho sekuyisikhathi sokuqala noma ngabe kwenzeka ngasiphi isikhathi.
Isayensi yokudla ingaba yinkohliso, futhi lawa magama angaqondakali awasizi njalo. Ukwazi okuncane mayelana nokuthi kungani futhi kungani ama-drains okudla kungakusiza ukuthi ugcine ifriji yakho igcwele isikhathi eside. Kepha uma ungaqiniseki ngempela dlala uphephile.
Siyabonga ngokubuka lesi siqephu seSciShow! IScishow ileyo eyenziwe yiComplexly, nayo ekhiqiza iziteshi ezifana neThe FinancialDiet, lapho iChelsea, u-Erin noLauren bazicwilisa ezihlokweni zabo zezimali ngaphandle kokwesaba. Uma ufuna ukufunda ngezinye izindlela zokugcina ifriji yakho igcinwe isikhathi eside futhi isabelomali, hlola i-athikili yakhe ku-Rules For Mastering The Grocery Store. Kusukela ohlangothini lwemali olungokomzwelo kuya kumagama ezezimali zobuchwepheshe, funda amaqhinga okwenza impilo yakho ibe ngcono ngokuba ngcono ngemali.
Bheka izindatshana ezintsha zeThe Financial Diet njalo ngoLwesibili nangoLwesine.
Ufunda kanjani ikhodi yedethi kaJulian?
Inombolo yokuqala ye-Usuku lukaJulianumele unyaka. Izinombolo ezintathu zokugcina zimele usuku olwenziwa ngalo. Ngakho-ke ngokwesibonelo, uma ukwenziwausukuibhalwe njengo-1067 lokho kungasho ukuthi i-MRE yenziwe ngoMashi 7, 2011.
Iyiphi indlela engcono yokufunda usuku lokuphelelwa isikhathi?
Ufunda Kanjani Izinsuku zokuphelelwa isikhathi 1 Funda ikhodi evaliwe njengosuku 'olwenziwe / olwenziwe'. 2 Funda izincwadi kube sengathi zabelwe izinyanga. 3 Qondanisa ikhodi enezinombolo zonke nokulandelana 'kwenyanga, usuku, unyaka'. 4 Humusha ikhodi enamadijithi ama-3 njengosuku enyangeni okwenziwa ngalo umkhiqizo. Buka Okuningi....
Ingabe kufanele ufunde usuku lokuphelelwa yisikhathi ekudleni?
Yize ukuhlola ukudla kwezimpawu zokonakala kuyindlela eyodwa yokuhlola ikhwalithi yayo, ukuqonda ukuthi uwafunda kanjani amakhodi wokuphelelwa isikhathi kokudla kuqinisekisa ukuthi ungahlala unquma ukuthi ukudla kukuphi esikhathini sokuphila kwaso. Ngezinsuku zokuphelelwa yisikhathi ezivulekile zokuphola, kuzofanele ufunde usuku ukuze wazi ukuthi ukudla kuphela nini.
Uwafunda kanjani amadethi okuphelelwa yisikhathi kuHershey's?
IHershey - Usuku Lokuphela. Inombolo yokuqala unyaka (0-9) incwadi yesibili inyanga (A-L, okuyiJan-Dec). Usuku lukaMars - Made. Idijithi yokuqala ingunyaka wamadijithi amabili alandelayo kuyisonto lonyaka enziwa ngawo. Idethi yeNestle - Made. Futhi, ingabe amaswidi anosuku lokuphelelwa yisikhathi?